Sergei futhi Vyacheslav Mavrodi amagama wezwa okungenani kanye, hhayi kuphela e CIS, kodwa futhi ngalé kwemingcele yayo. Futhi zonke sibonga umkhonyovu, bona cranked, ukudala kumasikhuphulane ngaphansi kwegama elibi "MMM". Naphezu kweqiniso lokuthi lesi sakhiwo kukukhohlisile izigidi zabantu Russian futhi ziphoqelelwe ukuba ngithi goodbye kuya ruble yabo zanqwabelana, iningi lezakhamuzi cabangela omunye wabasunguli mbhoshongo - uSergei - yisisulu sezimo nosomabhizinisi oze ngaphansi ubudlova uhulumeni, kodwa hhayi ukukhwabanisa.
Inkazimulo ubhuti Vyacheslav
Kuyindida iningi izisulu "MMM" akholelwa ukuthi unyaka abaphezulu Mavrodi wahlushwa kusuka kuhulumeni, okuyinto wamesaba amandla akhe, udumo kanye ithemba wasishiyela ezakhamizini zaseNingizimu Afrika. Uma Sergei ezisengozini isimo ephezulu kalula abuthele inhlolovo ethandwa futhi ngaleyo ndlela enquma imibuzo ezidingekayo. Ngemva kwalokho, imibutho yezokuphepha waqala ukumbeka icala imisebenzi yebhizinisi emthethweni futhi bokusola kuye i-athikili mayelana ukukhokha intela. Abaningi namanje bakholelwa ngobuqotho ukuthi uma isimo akangeneli ezindabeni "MMM", nabatshali zimali manje kufanele abayizinjinga. Abantu abanolwazi lochwepheshe ezithile kubhekwa genius uSergei, owakwazi ukuletha ekuphileni mbhoshongo zezimali wokuqala Russian futhi ziphoqelelwe izigidi zabantu ukutshala imali yabo kulo. Izinga lapho "MMM" usethule imisebenzi yayo hit kuze kube manje.
Kodwa uzokwenza kufanele kuphawulwe ukuthi zonke "amasevisi" akufanele ukunikeza kuphela Sergei. Uma kwenzeka "MMM" zonke izihlobo zakhe eduze Kwakuhileleke, ngoba ekholelwa ukuthi ukuphathisa ukuphathwa izigidigidi umfokazi, kungakhathaliseki iphephe kangakanani kungase kubonakale kungenakwenzeka. Ukuphathwa "MMM" Sergey cishe zonke izihlobo baye baboshwa, kuhlanganise nomfowethu nowokuzalwa encane - Mavrodi Vyacheslav.
imininingwane Omfushane abazali
Biography Vyacheslav Mavrodi nomfowabo ziyaphawuleka, akungabazeki of interest eziningi. Ikusasa osomabhizinisi-schemers bazalelwa e Moscow, bona - Muscovites. Ukwahlulela kusukela imibiko emfushane, engatholwa namuhla kule domain yomphakathi, abazali babo bengabavumeli zehluke nezinye izigidi zabahlali kweSoviet Union ngaleso sikhathi.
Panteley Andreyevich - - kwaba isifaki ezivamile Kuyaziwa ukuthi uyise ezaziwayo. Umama - uValentina Fedorovna - Economist. Engxoxweni, okuyinto wake wanikeza ukushicilelwa ehlonishwayo "Esquire" omncane Mavrodi Vyacheslav (izithombe kungabonwa ku-athikili yethu), kuthiwa isikhathi eside, umndeni sengihlale endlini eduze Novodevichy Sezindela. Ngokuhamba kwesikhathi, lathuthela indlu kanokusho. efulethini labo elisha wawusempumalanga Komsomolsk Avenue, ababehlala ngendlu eceleni umndeni malikov futhi Oleg Yankovsky.
Manje abazali babo azisaphili. Bobabili wabulawa isifo somdlavuza. UValentina Fyodorovna wayengekho 1986 - yena uyaziwa nomdlavuza wesibindi. Eminyakeni ethile ngaphambili, washiya uyise - ngo-1980, wabulawa umdlavuza wamaphaphu.
Ukuzibandakanya lebhizinisi umndeni nomsebenzi walo "MMM"
Umqondo yasekuqaleni ukwakha isakhiwo eziyihlazo wezimali "MMM" necebo umfowabo omdala, uSergei. Ukuphathwa multi-abayizigidi ezingu-dollar dolobha ukuthi angathembela kuphela abantu abaseduze. Ngakho Vyacheslav Mavrodi e isakhiwo adalwe umfowabo, kuba nomsizi kamongameli kanye accountant abakhulu. Yena ngenkuthalo kuyasiza uphindaphinde inhlokodolobha isihlobo sakhe segazi lakhe. Ngaphezu abasebenza "MMM", Vyacheslav nokobana amaphrojekthi amaningi yimpumelelo kakhulu kwezohwebo.
Umsebenzi Vyacheslav emva eduze mbhoshongo
Ngemva mbhoshongo zezimali nesithakazelo kakhulu emisebenzini iziphathimandla zentela futhi abazalwane base imisiwe, izigidi zimali wahlala lapho ukulahlekelwa futhi akazange ngempela ukuqonda ukuthi lena ekupheleni, futhi imali kababoni. Vyacheslav Mavrodi, isithombe ku-athikili yethu, ukuba singaweli uvalo akazange. Kunalokho, ku amanxiwa "MMM" kwakha mbhoshongo entsha, ngokuyisisekelo okwakukhona ngeminikelo yokuzithandela. Ngo-1996, kwakukhona okuningi yabatshali bezimali abaye bahlupheka futhi imali yabo. Ngemva konyaka, lesi simiso kuye esebenza ngenkuthalo esikhaleni ebonakalayo. Manje ukutshala mbhoshongo entsha kungaba ngokusebenzisa i-Internet, kodwa kuye kwanezela Vyacheslav Mavrodi abanikeli emhlabeni wonke.
Presentation amacala sokuqala esisemthethweni
Wonke lo msebenzi ngemibono ukukhuthaza uhlelo olusha zezimali Vyacheslav kwaholela cishe kusukela komhlaba. Ngalesi sikhathi, ke ngenkuthalo baphekwa ngemibuzo mayelana imisebenzi esivele yamboza "MMM", kanye Crime Russian Economic nesithakazelo kakhulu emisebenzini esimisweni esisha ngeminikelo yokuzithandela. Ngo-1998, i-Economic Crimes izikhulu ezosesha ehhovisi Vyacheslav ashaqa imigoqo yakhe igolide, ukuba semthethweni kohlelo yokufuna okuyinto abomthetho ziye zabangela ngangizibuza kaningi. Imibuzo wazithatha ngokuthi uyini umthombo futhi kokuthola imali, avunyelwe ukuthola Vyacheslav ingot enesisindo 21 5 g ngamunye.
Mavrodi Jr wakhetha ukuba siphendule le mibuzo, futhi ngenxa yalokho ngo-1999 ngokumelene naye kwaba icala lobugebengu. Vyacheslav yasebenza ngomshoshaphansi ...
Yena njalo washintsha esikhiphekayo eMoscow zokuhlala, kuzo akuvamile futhi kuphela uma kuhambisana onogada. abantu Ngokukhethekile waqasha wamnikeza ukudla nezinye izidingo. Kusukela ezweni elingaphandle, Vyacheslav ngenkuthalo okuxhunywana nge-Internet, futhi babhekana nesizungu ngezindlela zakhe lakhanya intombi, ngenxa okuyinto, empeleni, Vyacheslav Mavrodi Satholwa abomthetho.
Marina - umka Mavrodi abasebasha
Iqiniso lokuthi nombaleki iye yasiza ukuthola imprudence kwezinye intombazane lakhanya up isizungu sakhe, ekuqaleni kungase kubonakale kungavamile. Phela, wayehawukela lalimisa ngishade Marine Muravevoy. Vyacheslav Mavrodi wayenaye isimo sakhe. Kuyaphawuleka ukuthi Marina "MMM" kwaba wamabhuku ezimali, futhi amahemuhemu athi lo imisebenzi mbhoshongo, Wayethatha ingxenye esebenzayo. Kodwa ngaphambi ehlangana Vyacheslav owesifazane waba sesimweni ubuhlobo nge nomculi odumile - Gazmanov. Naphezu kweqiniso lokuthi kule ongaziwa at umshado wokuqala yazalwa ingane ezivamile (indodana kaPhilip, 1997 p.), Ubudlelwano ambalwa akunakwenzeka ukuba kube qotho. Mavrodi Vyacheslav nomkakhe Marina (izithombe ndawonye ukuthola in the domain yomphakathi akukwazi) ahlukaniswe cishe ngokushesha ngemuva kokuboshwa kwabasolwa Vyacheslav.
Ukuboshwa kanye bakhonze
Ngo-2001, Mavrodi abasebasha waboshwa. Ngo-2003, iNkantolo yakhipha isinqumo sayo. Vyacheslav watholakala enecala beqhuba imisebenzi yasebhange emthethweni futhi ukuthengiselana amatshe ayigugu. Isigwebo lalithé: ukuphucwa impahla kanye aboshwe isikhathi esiyiminyaka 5 futhi izinyanga ezingu-3. Vyacheslav wayedonsa isigwebo esikhathini IR №5, etholakala eduze Samara. isikhathi sakhe ejele wakhonza ngokugcwele. Ayikho izikhalazo ku ukuziphatha kwakhe ekuphathweni EC akazange kuphakama. Njengazo zonke ezinye iziboshwa kulo isikhungo, wasebenza lapho kuvezwa pasta. ukuziphatha kwakhe okuyisibonelo engokomfanekiso, kodwa ithuba ukudedelwa Udo Mavrodi ngezizathu ezingaziwa, akazange neze asizakale.
umbono lokungakahleleki phezu bakhonze
Uma Mavrodi ummeli abaphezulu wakhuluma ngalokho ngempela Vyacheslav ukudonsa isigwebo okuphelele, ngenxa yokuthi amajele njalo wamphika ku kuhanjiswa kwemibhalo ukukhululwa ngoshwele ngaphansi pretexts ahlukahlukene yasungulwa. Kuthiwa umuntu kusukela phezulu akazange ngempela ufuna Mavrodi udedelwe esandleni zasendle bengakakulungeli ngenxa. Kunoma ikuphi, njengoba isimo eqinisweni uquqaba ezibanzi cishe ngeke ukwazi.
Isehlukaniso nomkakhe kanye kokushiya yena nendodana yakhe ukuba umculi odumile
Ngemva isiphelo sesimiso Vyacheslav umkakhe cishe ngokushesha kwaqala ukuvela inkampani Olega Gazmanova. romance yabo Kwalandela ngaphambi kokuhlangana Marina Mavrodi, kodwa ngaleso sikhathi umculi wayeshade nomunye wesifazane futhi amshiye akazange alinge. Ngemva Muraveva wathola ithuba lokushada usomabhizinisi odumile, akazange acabange eside bambamba. Kukhona amahlebezi okuthi ngisho nangemva kokuba bashade, lowo wesifazane akazange ayeke ehlangane lo oculayo. Lapho isikhulu ugwetshwe umyeni, waqala ziyavela ephelezelwa Gazmanov emibuthanweni yokuzijabulisa isivele endaweni evulekile. Ngalesi sikhathi, u-Oleg akazange miss ithuba, lapho wahlukanisa nomkakhe odlule futhi ezihlongozwayo Marina. Okwamanje bona ngokusemthethweni ngesineke, noFiliphu, indodana yakhe umshado odlule Marina, Gazmanov iminyaka eminingi evusa njengendodana yakhe.
Vyacheslav wadedelwa ngo-2006. Ejele wahlangatshezwa yamaphoyisa ukuthi wathatha Mavrodi maqondana impilo entsha inkululeko. Ngaphansi izindonga etilongweni lakhe wahlangana izintatheli eziningi kusukela ekuxhumaneni ne enqaba. Vyacheslav wathi kuphela ukuthi akanawo nhlobo ukuya lapho futhi yini okufanele uyenze ngokulandelayo. Manje imisebenzi Mavrodi, Jr. alwaziwa. Kunoma amahlazo ephezulu iphrofayela nemikhonyovu kuze kube manje, ayizange waphawula.
Rick Allen: umlando edume wesigubhu eyodwa-ahlomile
Umlingisi Vadim Andreev: Filmography, biography, izithombe
-Ilungu Ex ka "UNdunankulu" Piter Dzheyson: Biography, nobuciko kanye nempilo yakho
Nicolai Gedda: Biography nemisebenzi
Maka kanye elingenamikhono izingalo Minsk. Izimpawu yenhloko-dolobha Belarusian
Reishi mushroom - intsha okuphakade nokuphila kade asebenzayo